PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: ဒီနေ့နေပြည်တော်ဖြစ်ရပ်မှန်များ
( ၁ ) အားကစားရုံ အားကစားကွင်း( ၁၁ )ခုအတွက် ဆောက်လုပ်ဖို့ ကိစ္စကို EC အဖွဲ့ အစည်းအဝေး မခေါ်ပဲ၊ EC အဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် မရှိပဲသူတယောက်ထဲ လုပ်တော့ တာပါ။
( ၂ ) ပြီးတော့ ဆောက်လုပ်မဲ့ ကုမ္မဏီတွေကို တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ခြင်း လုံးဝ( လုံးဝ ) မရှိပဲ၊ သူပိုင်တဲ့ Ace ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္မဏီကဲဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။
( ၃ ) ပြီးတော့ အားကစားရုံ အားကစားကွင်း( ၁၁ ) ခု စလုံးမှာတစ်ခုချင်းစီ အတွက် အသေးစိပ် ကုန်ကျမှုတွက်ချက်မှုစာရင်း BQ လည်းမရှိပါဘူး။
( ၄ ) နောက်တစ်ခု ရှိသေးတယ်ဗျာ၊ အားကစားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ Ace ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္မဏီတို့အကြားမှာ ဒီအားကစားရုံနဲ့ အားကစား ကွင်း( ၁၁ )ခုဆောက်လုပ်ဖို့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်စာတမ်း
လုံးဝ( လုံးဝ ) မရှိပါပဲနဲ့သူတစ်ဦးတည်းသူ့ သဘောနဲ့ သူဆောက်ခဲ့တာပါ။
( ၅ ) ကျန်သေးတယ်ဗျာ QC လို့ ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးစစ်ဆေးခဲ့တာ မျိုးလည်းမရှိ၊ အဆင့် တိုင်းကို QC အဖွဲ့ကစစ်၊ မှန်ကန်မှ တဆင့် ချင်းငွေ ထုတ်ပေး၊ ငွေထုတ်ယူတဲ့ စနစ်မျိုးလည်း မရှိပဲ ဆောက်နေခဲ့ တာ ပါ။ ( သူပိုင်ငွေမဲတွေနဲ့ပေါ့ဗျာ )
( ၆ ) ဟောအခုကြားရပြန်ပြီဗျို့၊ လုပ်ငန်းအားလုံြး ပီးသွားပြီတဲ့ ၊ ငွေထုတ်တော့ မှာတဲ့၊ ဘယ်လိုထုတ်မယ် ထင်သလဲ၊ Ace ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္မဏီပိုင်ရှင် သူဌေးတင့်ဆန်းက အားကစားဝန်ကြီး တင့်ဆန်းကိုတင်ပြတာတဲ့ ၊ပြီးပြီငွေထုတ်ပေးပေါ့ ။
အဲဒီမှာလည်းတ စ်ချက်ငြိနေပြန်ရော၊ လုပ်ငန်တစ်ခုပြီးပြီဆိုရင် Work Done ပြီးဆုံးချိန် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နဲ့စစ်ထားတာမျိုးကော ရှိသလားလို့ မေြး­ကည့် တော့ မရှိဘူးတဲ့၊ မလိုဘူးလို့ ဝန်ကြီးကပြော တယ်တဲ့ဗျာ။
( ၇ ) လာပါပြီ၊လာပါပြီ အလှပဆုံးသောအကွက်လေး ပြောပြပါအုံးမယ်။
Ace ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္မဏီပိုင်ရှင်သူဌေး တင့်ဆန်းက အားကစားဝန်ကြီး တင့်ဆန်းဆီကို တင်ပြတောင်းခံ လိုက်တဲ့ ငွေစာရင်း အသက်ရှုမှား မေ့မြောသွားလောက်ပါရဲ့ဗျာ။
( က ). ဖူဆယ်အားကစားရုံအတွက် သိန်းပေါင်း ၄၀၀ ကျော်။
( ခ ). ဘတ်စကက်ဘောကွင်း သိန်းပေါင်း ၅၀၀၀ နီးပါး။
( ဂ ). လက်ဝှေ့အားကစားရုံ သိန်းပေါင်း ၂၀၀ နီးပါး။
( ဃ). တင်းနစ်လေ့ကျင့်ရေးကွင်းပြွဲ­ကည့် စင် သိန်းပေါင်း ၅၀၀ ကျော်။
( င). နေပြည်တော်အားကစားလကရစခန်း သိန်းပေါင်း ၅၀၀၀ နီးပါး။
( စ ) လယ်ဝေးအားကစားကွင်း သိန်းပေါင်း ၄၀ ၀၀၀ နီးပါး။
( ဆ ). ငလိုက်ဆည်လှေလှော်ြ­ပိုင်ပွဲ သိန်းပေါင်း ၉ ၀၀၀ နီးပါး။
(ဇ) Mountain Pleasent စက်ဘီးကွင်း သိန်းပေါင်း ၈ ၀၀၀ နီးပါး။
(ဈ) မြှားပစ်ကွင်း သိန်းပေါင်း ၃၀ ၀၀၀ နီးပါး။
(ည) တာဝေးအပြေးတာလွှတ်နေရာ သိန်းပေါင်း ၃ ၀၀၀ နီးပါး။
( ဋ္ဋ ) မြင်းစီးကွင်း သိန်းပေါင်း ၂၀ ၀၀၀ နီးပါး။
အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် ကျပ်သိန်းပေါင်း ၂၀၀၀,၀၀၀ နီးပါးတောင်ရှိတယိဗျာ။
ကိုင်းဘယ့်နဲ့ရှိစ မောင်သမတမင်း၊ မောင်ညာဏ်ထွန်း၊ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ စသုံးလုံး ညွှန်ချုပ်ကြီးနဲ့၊ မှုခင်းတပ်ဖွဲ့မှုးတို့ ရေ အကြံပိုင်သောငခွေး ၊ Ace ဆောက်လုပ်ရေး ပိုင်ရှင် သူဌေး၊ အားကစားဝန်ကြီး၊ ငွေရှာတာ လုပ်တတ်လိုက်တာ။
လွယ်လိုက်တာ၊ ငွေမဲတွေကိုငွေဖြူ ဖေါ်တာကျွမ်းလိုက်တာ။ မယုံမရှိနဲ့။
စစ်ပဲတိုက်တတ်ပြီး၊ ကြားလားကြားလား၊ ကြားရင်အကြောင်းပြန်၊ ရထားဖြစ်ပါတယ်၊ ၉၆ ပါ။ ၆၃ ပါပဲလုပ်တတ်ပြီး၊ တင့်ဆန်းလိုငွေရှာတာ မကျွမ်းပဲ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးသွားလုပ်မိတဲ့ သိန်းထွန်း ခမျာသနားစရာပါ။
( စကားကြွင်း )
ကောင်းပါပြီ အမောင်သမ္မတမင်း နားတွေ၊ မျက်စိတွေကိုနေရာ အနှံ့မှာထားပြီး အားလုံးကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီ သိအောင်သာလုပ် ထားပေတော့ ။ အခုတင်ပြလိုက်တဲ့ သတင်းကို သေသေချာချာ စုံစမ်း စစ်ဆေးဖေါ်ထုတ်ပြီး စံနမူနြာ­ပ အရေးယူပြလိုက်ပါ။
ခင်ဗျားကြီးသိပ်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကြီးေ ကာင်းသွားမယ်။ Good Governance , Clean Government ဖြစ်သွားပါမယ်။
Posted From Thein Win